Hlola iCairo, eGibhithe - World Tourism Portal
Hlola eCairo, eGibhithe
Okufanele ukubone eCairo. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eCairo, eGibhithe.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eCairo
Bukela ividiyo ekhuluma ngoCairo
Hlola iCairo, inhlokodolobha ye Egypt futhi, sinesibalo sonke sabantu abangaphezu kwe-16 yezigidi, elinye lamadolobha amakhulu e-Afrika nase-Middle East. Futhi iyidolobha elikhulu kunawo wonke emhlabeni i-19th emhlabeni, naphakathi kwamadolobha anabantu abaningi kakhulu emhlabeni.
EMfuleni iNayile, iCairo idume ngomlando wayo, egcinwe edolobheni elihle lamaSulumane aphakathi nendawo nezindawo zamaCopt e-Old Cairo. Imnyuziyamu yaseGibhithe enkabeni yedolobha kumele ibonwe, kanye nezinto zayo zamandulo zaseGibhithe zasendulo ezingenakubalwa, njengoba kuyothenga eKhan al-Khalili bazaar. Alukho uhambo oluya eCairo olungaqedwa, ngokwesibonelo, ngaphandle kokuvakashela eGyramid Pyramid, kanye naseSaqqara Pyramid Complex, lapho izivakashi zizobona iphiramidi lokuqala laseGibhithe elakhiwe umakhi wezakhiwo u-Imhotep wenkosi yesithathu kaFaro, uJosos.
Yize inamathele ngokuqinile esikhathini esedlule, iCairo futhi iyikhaya lomphakathi wanamuhla onempilo. Indawo yaseMidan Tahrir etholakala enkabeni yedolobha laseCairo, eyakhiwa ngekhulu le-19th ngaphansi kokubusa kukaKhedive Ismail, ilwele ukuba yi "Paris emfuleni iNayile ”. Kukhona nenqwaba yezindawo ezingaphansi zanamuhla ezibandakanya iMa'adi neHeliopolis, kanti iZamalek iyindawo ethule eGezira Island, enezitolo ezinkulu. ICairo ihamba phambili ekwindla noma entwasahlobo, lapho isimo sezulu singashisi khona. Ukugibela i-felucca emfuleni iNayile kuyindlela enhle yokubalekela edolobheni elixakekile, njengokuhambela e-Al-Azhar Park.
Isifunda saseGiza yisifunda esentshonalanga nedolobha elibheke eNayile lapho iGiza Zoo ikhona nezinye izinto ezimbalwa ezikhangayo. IGiza Governorate iqukethe isifunda saseHaram lapho kutholakala amaGyramy eGyramid. Ababusi baseCairo naseGiza bahlanganile ngaphezulu noma ngaphansi edolobheni elifanayo leGreater Cairo, yize ekuqaleni yayingamadolobha amabili ahlukile. Igama elithi Giza livame ukubhekisela esifundeni saseGiza esikuCairo, hhayi indawo eyiyo yangempela yemibhoshongo!
IHeliopolis neNasr City empeleni ziyindawo ezihluke ngokuphelele. IHeliopolis yisifunda esidala lapho kuhlala khona abaseGibhithe abasebenza kahle nabantu besigaba esiphakeme, esakhiwe umakhi wezakhiwo waseBelgian. INasr City intsha, futhi iqukethe iCity Stars, i-Cairo enkulu kunazo zonke futhi iyindawo yesimanje yezitolo, kanye nenkundla yezentengiso yezentengiselwano. Isikhumulo sezindiza empeleni sisekude empumalanga yale ndawo ngaphandle ogwadule oluseduze kwaseMasaken Sheraton
Iphakathi kweNayile, iCairo inemvelaphi yakudala, etholakala eduzane nedolobha lasePortonic laseMemphis. Idolobha laqala ukuthatha isimo salo samanje kwi-641 AD, lapho inhloko yama-Arab Amr Ibn Al-Ase inqoba Egypt ye-Islam futhi yasungula inhloko-dolobha entsha ebizwa ngokuthi iMisr Al-Fustat, "Idolobha Lamatende", ngenxa yenganekwane yokuthola kwe-Al-Ase, ngosuku ayephuma ngalo ukuyonqoba Alexandria, amajuba amabili ahlangana esidlekeni sakhe. Engafuni ukubaphazamisa, washiya itende, okwaba indawo yedolobha elisha kulokho manje okuyi-Old Cairo.
ICairo inesimo sezulu esishisayo sogwadule njengendawo engaphakathi yaseGibhithe. Isikhathi esihle sokuvakatshela leli dolobha kusuka ngoNovemba kuya ku-Mashi lapho izinsuku zifudumele futhi nobusuku bupholile.
IGreater Cairo yanamuhla idolobha, lapho kudotshwa khona izikebhe zokudlela nezindawo zokudlela ezisheshayo ezikhumbuzweni zomhlaba zamagugu. Ekuqaleni, iCairo kwakuyigama ledolobha elibekiwe ngasogwini olusempumalanga yeNayile, futhi kulapho uzothola khona bobabili iDowntown yesimanje, eyakhiwe ngaphansi kwethonya lokwakha izakhiwo zaseFrance, namuhla isikhungo sezentengiselwano nempilo ethandwayo, kanye zomlando wamaSulumane namaCopt.
Ngaphandle komgogodla osebhange lasempumalanga, uzothola amadolobha anamuhla, acebile e-Heliopolis neNasr City eduze kwesikhumulo sezindiza, neMa'adi eningizimu. Maphakathi neNayile kukhona isiqhingi iGezira neZamalek, eNtshonalanga futhi enokuthula kunalo lonke idolobha. Ebhange lasentshonalanga kunokhonkolo kanye nezamabhizinisi eziningi zesimanje, kodwa futhi nemiphiramidi emikhulu yeGiza futhi, kuya eningizimu, iMemphis naseSaqqara. Idolobhana lingahle libonakale njengokuningi ukuphatha, kepha ulizame, futhi uzothola ukuthi kunokuningi ongakuhlinzeka nganoma yimuphi umhambi.
Uma ukhuluma nomuntu noma iqembu labantu okokuqala, into enhle ongayisho ukwahluka kwendawo yamaSulumane yokubingelela ngokuthi "Es-Salāmu-`Alēku" okusho ukuthi "Ukuthula makube phezu kwakho". Le yindlela evamile kakhulu ethi "sawubona" ​​kunoma ubani. Kwakha ubungani phakathi kwakho nabantu ongabazi, kwakha i-rapport, futhi kusiza ekwakheni inhlonipho! Kubhekwe futhi kube yinhlonipho ukusho lokhu uma ukhuluma nomuntu, esikhundleni sokumcela okuthile noma ukukhuluma naye ngqo.
Abesifazane nabesilisa kufanele bagqoke izingubo ezinesizotha. Kubhekwa njengokungahloniphi izakhamizi ezingamaSulumane ezingalondolozeki ukubona izivakashi zihamba zigqoke izingubo ezembula amathanga, amahlombe, ingemuva noma i-cleavage, ngaphandle kwalapho emabhishi nasemahhotela. Abesilisa futhi kufanele bangahambi behamba ngezinyawo begqoke izifuba noma begqoke izikhindi ezimfishane kakhulu ngaphandle kwamahhotela noma izindawo zokungcebeleka zolwandle.
I-Cairo International Airport yisikhumulo sezindiza esikhulu kunazo zonke e-Afrika enabagibeli abangaphezu kwezigidi ezingama-16 ngonyaka.
ICairo iyikhaya lohlelo lwamadolobha lokuqala nolwandisayo lwe-Afrika. Ngenkathi uhlelo lukaMasipala waseCairo lusebenza ngokugcwele lungolwesimanje futhi lumile, kukhona imigqa emithathu emboza iningi lesifunda esikhulu seCairo.
Abasebenzisi bezitulo ezinamasondo, qaphela njengoba izakhiwo eziningi zinokufinyelela kuphela kwezinyathelo. Amapulethi ayahlukahluka, ngisho nasezintweni ezithandwayo zezivakashi. Imvamisa kunokwehla okumangazayo okuvela kumaphethelo futhi lapho kukhona khona izintambo kufaneleka kangcono kuma-wheelchair kunezihlalo ezinamasondo. Lindela imigodi, imigodi, imisebenzi engemihle eyakhiwe ngentambo nemisebenzi yemigwaqo, nezimoto zimile ngaphesheya kwendlela, lapho kunendawo yokuwela umgwaqo nhlobo.
I-Al-Azhar Mosque. Enye yezinsika zomcabango wamaSulumani kanye nekhaya leyunivesithi endala emhlabeni.
ICairo tower 185m ephezulu esiQhingini saseGezira inikezela ukubukwa kwe-360 ° kweCairo, kanye namaGyramyamaGiza kude nebanga elingasentshonalanga.
ICitadel neMosque kaMohamed Ali Pasha, e-Islamic Cairo. Inqaba enkulu eyakhiwe nguSalah Al-Din. Futhi izingxenye zamapayipi amanzi (iMajra Al-Oyouon) zisekhona, la mapayipi asetshenziselwa ukuthwala amanzi asuka eMfuleni iNayile aya e-citadel. U-Mohamed Ali ubhekwa njengomsunguli weGibhithe lanamuhla, ukhokho weNkosi yokugcina yaseGibhithe, inkosi uFarouk.
Imnyuziyamu yaseGibhithe (i-250m enyakatho nesifunda iTahrir) etholakala endaweni yaseMidan Tahrir futhi yaqanjwa ngokusemthethweni yi-The Museum of Egypt Antiquities kodwa yaziwa yibo bonke njengeMnyuziyamu waseGibhithe; iphatha ukuqoqwa okukhulu kwendunakulu komhlaba wezobuciko basendulo baseGibhithe. Intengo ibiza kakhulu kusihlwa kusihlwa ngasizathu simbe.
U-Ibn Tulun (Eduze kuka-Sayida Zeinab). I-Arguingly the mosque yakudala eCairo, eyakhiwe phakathi kwe868 ne884.
UKhan El Khalily. Indawo yaseCairo yokuphumula lapho izivakashi zizothola abathengisi abaningi abathengisa amakha, izinongo, Igolide, izandla zezandla zaseGibhithe.
IPhioniconic Village. Cishe imizuzu engamashumi amabili uma ushayela phakathi nendawo iyidolobha elimele futhi libonise iGibhithe. Kuqala ngokugibela isikebhe okukhombisa onkulunkulu basendulo nababusi abalandelwa yimiboniso ebukhoma yokuthi abaseGibhithe baphila futhi basebenza kanjani. Ngaphandle kwalokhu kuneminyuziyamu ehlukahlukene ekhombisa imiphiramidi, ukuqothula, umlando wamaSulumane (hhayi onembile kakhulu), umlando waseGibhithe, ababusi bekhulu leminyaka elidlule neGibhithe lanamuhla. Ngokubanzi le ndawo isifinyezo esihle seGibhithe (yize kungenalutho ngaphakathi olungokoqobo).
Imiphiramidi yeGiza neSphinx. Ukuphela kwesikhumbuzo esisele seMangaliso Eziyisikhombisa Zomhlaba Wamandulo, kuyinto ethandwa kakhulu izivakashi kuleli.
ISanta Samaan i-Tanner Monastery. Esigabeni seZabbaleen (abantu bedoti). (ISifunda saseManshiet Nasser) ngaphansi kweMokkatam Hills, engekude neCitadel (hhayi phakathi kokuhamba ibanga elifanele). Amasonto angamaCopt amaChristian kanye namahholo akhelwe ngaphakathi emihumeni enkulu nangaphansi kobuso bezinto ezivulekile. Njengoba izithuthi zomphakathi zingangeni kule ndawo, ukuhlela imoto eqashiwe noma ukuthola i-tour (uma ikhona eyodwa egijimayo) kuyizindlela ezingokoqobo zokufinyelela esigodlweni. AmaZabbaleen awasetshenziswanga ukusebenzisana nezivakashi; ukuthatha izithombe zazo, ikakhulukazi ngenkathi usemsebenzini, kungaholela ekungaqondini.
I-Al-Azhar Park. Ingadi esanda kuvulwa eyakhiwe ibheke iCitadel
Isigodlo se-Abdeen. Cishe i-1km ukusuka eMidan El-Tahrir ukuhamba imizuzu emihlanu, ikhaya lenkosi yokugcina yaseGibhithe inkosi yasekudingisweni uFarouk.
Ama-ATM, atholakala kalula ezindaweni ezahlukahlukene phakathi nedolobha. Inketho ephephe kakhulu ama-ATM emahhotela ezinkanyezi ezinhlanu. Kukhona futhi izindawo eziningi eziphatha ukushintshaniswa kwemali, noma ungazama noma yiliphi ibhange elikhulu ngokushintshaniswa kwemali.
Yini okufanele uyidle-isiphuzo eGibhithe
EGibhithe, omakhalekhukhwini bayindlela yokuphila. Ukuhamba ngezinyawo kunoma yimuphi umgwaqo, noma ebhasini eligcwele abantu, kubonakala sengathi iningi labaseGibhithe liyimilutha kumaselula (afanayo nalokho ongase ukuthole Japan noma Korea). Esikhundleni sokusebenzisa ifoni yakho ezweni lakini (elivame ukuthwala imali ephezulu kakhulu yokuhamba), cabanga ngokuthola iSIM yaseGibhithe noma ifoni engavuleki engabizi.
Ungathola ukuthengisa ngeselula kuzo zonke izingxenye zeCairo (ngokungagwegwesi, awukwazi ukukugwema), futhi ukusetha kulula kulula.
Hlola iCairo bese uvakashela izikhumbuzo zasendulo futhi uthole umbono wokuthi kwakunjani ukuhlala ngaleso sikhathi eminyakeni yama-pharaoh.